Gbasara Anyị - Foneelu Of The Day
Ndewo ebe ahụ!
Daalụ maka ileta anyị Funneloftheday.com Site! Anyị maara na ị ga-erite uru site na niile ozi dị ebe a. Ị ga-achọpụta na eziokwu banyere a ọnụ ọgụgụ nke na-ewu ewu (ma na-ezighị ezi myths) mgbe ọ na-abịa mgbasa ozi akpaaka.
M kere a website ikwu uche m na uru nke mkpọsa akpaaka na inyere ndị mmadụ aka ka ihe ọmụma na mkpebi iji na-amalite ma ọ bụ na-eto eto ha online ma ọ bụ obodo azụmahịa. ọma. N'ihi na e nwere ọtụtụ scams na internet na ihe ọmụma dị ukwuu n'oge, ọ bụ n'ezie siri ike ịmata ihe n'ezie na-arụ ọrụ.
Anyị na-na bee site niile mama ma kpughee eziokwu ahụ ga-enyere gị aka ikpebi.
Na-eche free na-aga site anyị website
-The itinyekwu of The Day Team
P.S. Ọ bụrụ na ị na-amasị saịtị a na chọrọ ozi ọzọ, anyị ukwuu nwere ike ikwu iji kpọtụrụ ma ọ bụ ịkọrọ ya enyi gị! Ọ nwere ike na-enyere ha aka kwa!